[အခန်းဆက်] Kitty နဲ့ဒိတ်အုံးမယ် @ Spruce Pansodan ဆိုင်လေးမှာကွယ် | yathar Magazine
Food concierge, just for you.
ကနျြးမာ & အလှအပ
A Shay Gyi (trigers)
Hsu Labb Wai
Lin Win Maw
Myet Hman Su Shi (trigers)
Fatty Ninja (trigers)
yathar magazine office
Shwe Sagar Beauty Salon ရဲ့ တညျထောငျသူဖွဈတဲ့ မရှရေီ နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
De De Beauty Salon ရဲ့ တာဝနျရှိသူနဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး
What is Local SEO? (Local SEO ဆိုတာဘာလဲ?)
နရောအသဈ၊ ဝနျဆောငျမှု အသဈတှနေဲ့ ကနျရိပျသာလမျးက ရှခေိုငျ BBQ Yangon
yathar smart order ကို လကျရှိအသုံးပွုနသေော Sweet & Spicy Restaurant ပဲ့ကိုငျရှငျ မဝတျရညျ နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
သာမနျ Menu စာအုပျမြားမှ တဈဆငျ့ Digital Menu book မြား သို့ ကူးပွောငျးလာခွငျး
အစားအသောကျပုံတှကေို ဘယျလိုမြိုး စားခငျြစဖှယျဖွဈအောငျ ရိုကျကူးကွသလဲ ?
အှနျလိုငျးကနေ အစားအသောကျမြား ရောငျးအားကောငျးလာ ရခွငျး လြှို့ဝှကျခကျြမြား
အစားအသောကျလောကမှာ နာမညျအကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ Foodpanda နှငျ့ yathar တို့ Collaboration ပွုလုပျခွငျး
[အခန်းဆက်] Kitty နဲ့ဒိတ်အုံးမယ် @ Spruce Pansodan ဆိုင်လေးမှာကွယ်
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 1, 2020
မင်္ဂလာပါ ! !
၁လမှာ ၁ကြိမ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ! Kitty နဲ့ဒိတ်လုပ်မယ့်အချိန်လေးရောက်လာပါပြီ ★
ဒီနေ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးဒိတ်မယ်နော် ! !
“ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ကြိမ်က Date မယ် @ Bar Dandy” မှာတုန်းကအရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့် Kitty အရက်မသောက်ဖြစ်အောင်ရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ရှေ့တစ်ခေါက်ကနမူနာယူပြီး လူကြီးဆန်ဆန်လုပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိတယ် !
ကဲ ဒီနေ့ဘယ်နေရာကိုသွားခဲ့တယ်ထင်လဲ ? ?
Kitty ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့နေရာက အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာရှိတဲ့
Garden Hotel ရှေ့ ။
「・・・ဟင် ? ဟိုတယ် ? ? ? နေမ၀င်သေးတဲ့ လင်းထိန်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ နဲနဲရဲဆေးတင်ပြီး・・・」
「အင်း သေချာပါတယ်။ နဲနဲတော့လန့်သွားတယ်ရှင့်」
「 ဒီဟိုတယ်မှာလေ။ 」
「 အသေအချာပဲ ဟိုတယ် ? ? ဒီဟာကတော့တကယ်ပဲအကူအညီလိုပြီထင်တယ် ・・・」
「 kitty。ဒီအပေါ်ထပ်မှာဆိုင်ကရှိတာ 」
「 ဟုတ်တယ်နော်။ အဲ့ဒီလောက်တော့ တို့လည်းသိပါတယ်။ 」
「 ဓာတ်လှေကားလေးစီးပြီး အပေါ်တက်ရအောင်။ 」
「ဓာတ်လှေကားတဲ့ . . . တသက်မှာတခါဆိုသလိုအမှားမရှိဘူးဆိုတာနားလည်တယ်မလား။ 」
「 Restaurant & Barလို့တော့ရေးထားတယ် ! သိသားပဲ ! ! 」
「 ဆိုင်လေးဖွင့်တာ နှစ်ဝက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ 」
「 ဟယ် ! ! ဆိုင်အတွင်းပိုင်းမှာ ဘားကောင်တာလေးရှိပြီး အပြင်ထွက်လိုက်ရင် Roof Top Bar လေး ! ! တွေ့လား ဟိုတယ်အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတာ ! ! ဟဟဟ ! ! 」
ဟဟဟ ! !
၁ယောက်တည်းသီးသန့်ထိုင်ခုံလေးကိုတွေ့ရှိ ! !
「 အ မဖြစ်ဘူး အဖြစ်ဘူး လူကြီးဆန်ဆန်လုပ်ကိုင်ရမယ်။ 」
kitty ကောင်းလေးစောင့်နေတယ်လေ !
「 (တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး)နော်・・・လှလိုက်တဲ့・・・နေ၀င်ဆည်းဆာ・・မြင်ကွင်းလေးပဲနော်・・」
「 ချီးယား . . . 」
ကောင်းလိုက်တဲ့ခံစားချက် ! ! အခုထိဘယ်သူမှမရိပ်မိသေးဘူး ! kitty ! !
「kitty。ရွှေတိဂုံဘုရားလည်းမြင်ရတယ်။ သပ္ပာယ်လိုက်တာနော်။ 」
「 အင်း・・သပ္ပာယ်လိုက်တာနော် (သပ္ပာယ်တယ်ပြီးတော့ ဗိုက်ဆာနေပြီ) 」
「 ခဏလောက်နှစ်ယောက်ထဲရှုခင်းတွေကြည့်ရင်းစားပြောရအောင်လား။ 」
「 အင်း ကောင်းပြီလေ . . . ( ခဏလောက် အမြည်းတခုခုလောက်ပေးပါအုံး။ ) 」
「နေ၀င်ဆည်းဆာနဲ့အရမ်းကိုသပ္ပာယ်နေတဲ့ဘုရားကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ kitty အရမ်းကိုပြီးပြည့်စုံနေတာ ・・」
「ပျော်လိုက်တာ . . (ဟင်? ! ကြက်ကြော်အနံ့ရတယ် ! မဖြစ်ဘူး ! စားချင်စိတ်တွေတအားဖြစ်လာပြီ ! ! 」
「နော် kitty ရဲ့အကြိုက်ကိုပြောပြပါလား？」
「ဟယ် ? ? ? ? 」
「kitty。ဗိုက်ဆာနေပြီလား ? ဒါဆိုရင် တခုခုမှာရအောင် ! 」
「အင်း ・・နဲနဲတော့စားချင်နေပြီ . . ( ကြက်ကြော်ကြက်ကြော် ကြက်သားကြော် ကြက်သားကြော်) 」
【 စောင့်နေရနတာကြာသွားပြီ 】
YEAH~~~~!!!! စောင့်နေခဲ့တာ ! !
အရသာအရမ်းရှိမယ့်ပုံပဲ ~~~~ ! ! ! ! !
ကြက်ကြော်ကွ ကြက်သားနဲ့ကြော်ထားတဲ့ ဟင်းပွဲလေး ! ! !
စားပါတော့မယ် ! ! !
အရသာရှိလိုက်တာ ~~ ! ! ! မောင်လေးရေ ! ဒီဟာဘာလေးလဲ ? !
【 ဒီဟာလေးတွေကပြောင်းဖူးကြက်သားလုံးကြော်နဲ့ ကြက်တောင်ပံအစပ်ကြော် ပြီးတော့ အကြော်သုံးမျိုးပါ။ ဒီဆိုင်မှာတော့နံပါတ်တစ်လူကြိုက်အများဆုံး (၃)မျိုးပါ။ 】
စပ်တယ်စပ်တယ် ! ! ဟားဟား စပ်ပေမယ့်လည်းအရသာကကြိုက် ! !
Kitty မေးခွန်းတွေမေးထားတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါအုံး။
【ဒီဟင်းပွဲလေးတွေက ၁မျိုးဆို ၅၀၀၀ကျပ်၊ ၂မျိုးဆို ၉၀၀၀ကျပ်၊ ၃မျိုးဆို ၁၃၀၀၀ကျပ် ဆိုပြီးရွေးချယ်လို့ရတဲ့ BAR BITE လို့ခေါ်တဲ့ မီနူးပါ။ တခြားမီနူးတွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းလျာနဲ့ ပါစတာတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်။ 】
ဟုတ် ! အား………..! !
ဘာလဲ – – ! !
「တကယ်ပဲအရသာရှိတယ်ကွာ – – ! ! ကြက်တောင်ပံအစပ်ကြော်က ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးနဲ့အရသာ တွေစိမ့်ဝင်နေလို့ ကောင်းတဲ့အပြင်ပိုလို့အရသာတိုးအောင်ငရုတ်သီးအချဉ်လေးနဲ့တို့စားလိုက် မိုက်မိုက်၊ ပြောင်းဖူးကြက်သားလုံးကြော်က တလုတ်စာအနေတော်လေးဆိုတော့ပါးစပ်ထဲကိုတစ်ခု ပြီးတစ်ခု၊ ငါးမုန့်၊ တို့ဟူးကြော်၊ အာလူးကြော်သုံးမျိုးစပ်လေးကလဲ စားပြီးရင်းစားချင် ~~~~! ! ! 」
「နောက်တစ်ကြိမ်လာရင်တော့ ၃မျိုးပါတာတဲ့မီနူးကိုပဲရွေးချယ်ရမယ် ! ! ၁မျိုးနဲ့ ၂မျိုး ရှိပေမယ့်လည်း ၃မျိုးမြောက်ကိုထပ်မှာမှာပဲမလား ? လို့အပြောမခံရအောင်လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၃မျိုးပါတဲ့မီနူးကိုရွေးချယ် တာကပိုဈေးသက်သာတယ်လေနော့! ! အဖွဲ့လိုက်စုပြီးစားလို့လည်းရသလို ကျန်တဲ့မီနူးတွေလည်းမှာစားလို့ရတာပေါ့၊ မိန်းကလေးတွေပဲလာရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူး ! ! အင်း ! ! ဟုတ်တယ်မလား ! သူငယ်ချင်းတွေကိုချိန်းကြည့်ပါလား・・・」
စောင့်ပါအုံး ! ! စနေပြီလား ! ! !
Unplugged Music Night ? ? ?
【အပတ်တိုင်း ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ စနေနေ့ ည(၇)နာရီမှာအခမဲ့ Live သီချင်းတွေနားထောင်ခွင့်ရမှာနော် 】
「ဒီလို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သီဆိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ ! ! အဆိုတော်အစ်ကိုတွေရဲ့နာမည်က ? ?」
အသံ ချိုချို ! !
「ဒီလိုမြန်မာသံစဉ်သီချင်းတွေကို စည်းချက်ညီညီ အသံချိုချိုလေးနဲ့သီဆိုနေတာအရမ်းကိုပြည့်စုံ နေပြီရှင်။ ကိုယ်တိုင်တောင်သီချင်းဆိုချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ ( ဟီးဟီး ) 」
ကာရာအိုကေရှိတယ်ဆိုတော့က ! !
「အရမ်းကောင်း – – ! ! ဂျပန်သီချင်းတွေရောရှိလား・・？」
အင်း . . . ရှိရင် ? !
「မိုက်မှမိုက် ! ! ကဲဒါဆိုမြန်မာကောင်လေးနဲ့အတူတူလာရင်လည်းဂျပန်သီချင်းတွေဆိုလို့ရပြီ ! !」
【ကာရာအိုကေက ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတည်းကသေချာမပြင်ဆင်ရသေးလို့ အခုကစလို့ပြင်ဆင်မှုတွေစလုပ်မှာပါ 】
「ဒါပေမယ့် ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ကန်တုန်၊ ကိုရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပြင်သစ်စတဲ့သီချင်းတွေ တော့အများကြီး ! ! ! 」
Unplugged Music Night မှာပဲဆိုတော့မယ်
「မြန်မာသီချင်းတွေက Live အနေနဲ့ဆိုပြနေတော့ ကာရာအိုကေမလိုဘူးရှင့် ! ! နိုင်ငံခြားသားတွေ ကတော့ ကာရာအိုကေရှိနေတော့ ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ရှင့် 」
【 ဂျပန်လူမျိုးဆီကနေချီးကျူးစကားကြားရမှာအလွဲတဲ့အရာရှိတယ်ရှင့် 】
Yamazaki ! Hakushu ! ! Nikka ! ! !
ဟေး မိတ်ဆွေတို့ . . ! ! !
「ဂျပန်ဝီစကီတွေ ! ! ! ! ! ! ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာတောင်
ရှားပါးကန့်သတ်ပစ္စည်းအထိ ! ! ! ! ! ! ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု 」
【kitty လန့်သွားတာက ဒီမှာကြည့်ပါအုံး・・】
ဆရာ Remy Martin . . .
တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် . . ! ! !
「ဂျပန်ယမ်းနဲ့ဆို ၃သိန်းဝန်းကျင်။ Roppongi, Ginza မှာဆို ၁၀သိန်းလောက်အထိဈေးပေးရမယ့် Louis XIII. မြန်မာနိုင်ငံမှာနှုတ်ဆက်ခွင့်ရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးရှင်။ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ kitty ပါရှင့်။ 」
「၀ိုးဟိုး – – . . . ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘားကိုခေါ်လာပေးတာ ပျော်လွန်းလို့ – – ! ! ကျေးဇူးပါ . . . ? ဟင် ? ? 」
「ဒုက္ခပါပဲ ! ! ! ! အရာအားလုံးက ကြက်ကြော်ကနေစလိုက်တာ ! ! ! ! ၀ိုင်တစ်ခွက်လောက်ပေးပါ ! ! ! ! ! ! 」
ဒီတစ်ခေါက်လည်း ထပ်ပြီးအသည်းကွဲသွားတဲ့ kitty ။ အခြားသူရဲ့အပြစ်လို့ပြောလို့လည်းမရ !
အခုတော့နောက်ထပ်အသည်းအစားထိုးရအုံးမယ့် ! kitty ! !
နောက်လမှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ် ! မိတ်ဆွေတို့အားပေးပါအုံးနော် ! !
ညနေစောင်းကနေသွားမယ်ဆို နေ၀င်ဆည်းဆာရယ် ရွှေတိဂုံဘုရားရယ် လှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုခံစားနိုင်မှာပါ !
သေချာတာပေါ့။ ညမီးအလင်းရောင်တွေရဲ့အလှကိုလည်းမြင်ရမှာပါ ! !
မနက်စာနဲ့နေ့လည်စာတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့ ! !
Spruce Pansodan ဆိုင်လေး ! သွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့် ! !
ကနျြးမာ & အလှအပ • လမျးကွောငျးသဈ
4 ပတျ ago
2 လ ago
စားသောကျဆိုငျ • လမျးကွောငျးသဈ
7 လ ago
TOKYO ODEN BOYS က ခစ်တီပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာမိန်းကလေးဟာသလူရွှင်တော်အဖြစ်အနုပညာလှုပ်ရှားတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၃၀ကျော် အပျိုကြီးပါ! မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များရေပန်းစားတဲ့ Idol တယောက်ဖြစ်ဖို့ နေ့တိုင်းမြန်မာစာကိုကြိုးစား သင်ယူနေပါတယ်။ ၃၀ကျော်အပျိုကြီးပါ! ကြင်ကြင်နာနာနှင့်မြန်မာစာကိုသင်ကြားပေးမယ့် ခန့်ညားချောမောတဲ့ ချစ်သူကိုရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ ကူညီကြပါအုံးရှင့် !
Yathar နှင့်ပူးပေါင်းပြီး တချိန်ချိန်ရလာမယ့်ချစ်သူလေးနှင့်အတူသွားရန်အတွက် dateလုပ်ဖို့အသင့်တော် ဆုံးဆိုင်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်!
TOKYO ODEN BOYS
MNTV Happy Japan
[အခန်းဆက်] စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲက RED HOT CHILI စတိုင်ထိုင်းဟင်းလျာ !
၄ နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ရိုခွင့်ရှိသူများ
ကနျြးမာ & အလှအပ104
ကွကျဥကို ပုံမှနျအတိုငျးစားရတာ ရိုးနရေငျ ဒါမြိုးလုပျစားကွညျ့ပါ
သငျမသိသေးပမေဲ့ ဒီအစားအစာတှကေ ပေါကျစီကို ပိုကွီးစနေိုငျပါတယျ
သှေးအားကောငျး အောငျ မဖွဈမနစေားပေးသငျ့တဲ့ အစားအစာ (၅) မြိုး
ဆော်ကြည်ချင်လား ? ဒါတွေစား….!
အိမျမှာပဲ sushi လုပျစားကွမယျ
သိမ်းထားသင့်တဲ့ ဟင်းချက်နည်းပေါင်းချုပ် 16.7k views
ကွကျဥကို ပုံမှနျအတိုငျးစားရတာ ရိုးနရေငျ ဒါမြိုးလုပျစားကွညျ့ပါ 13.2k views
ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်သွားမလဲ ဘာစားမလဲ 10k views
ဆီလုံးဝမလိုတဲ့ ကွကျတောငျပံကွျောနညျး 9.3k views
ဆော်ကြည်ချင်လား ? ဒါတွေစား….! 7.4k views
မှတျတမျးမြား လ ရှေးပါ ဧပွီ 2022 မတျ 2022 ဇနျနဝါရီ 2022 အောကျတိုဘာ 2021 စကျတငျဘာ 2021 ဩဂုတျ 2021 ဇူလိုငျ 2021 ဇှနျ 2021 မတျ 2021 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2021 ဇနျနဝါရီ 2021 ဒီဇငျဘာ 2020 နိုဝငျဘာ 2020 အောကျတိုဘာ 2020 စကျတငျဘာ 2020 ဩဂုတျ 2020 ဇူလိုငျ 2020 ဇှနျ 2020 မေ 2020 ဧပွီ 2020 မတျ 2020 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2020 ဇနျနဝါရီ 2020 ဒီဇငျဘာ 2019 နိုဝငျဘာ 2019 အောကျတိုဘာ 2019 စကျတငျဘာ 2019 ဩဂုတျ 2019 ဇူလိုငျ 2019 ဇှနျ 2019 မေ 2019 ဧပွီ 2019 မတျ 2019 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
Copyright © 2022 yathar Myanmar Co.,Ltd. All Rights Reserved.